I-LS Vision High-Speed ​​Dome WiFi Ptz Network Inethiwekhi Ukuhlolwa Kwenethiwekhi
Iningi lamakhamera wokuhlola ukuphepha wanamuhla angabheka kuphela izithombe ezihleliwe, ubukhulu bokuqapha buncane, abakwazi ukuqapha abaningi kakhulu ...
Iningi lamakhamera wokuhlola ukuphepha wanamuhla angabheka kuphela izithombe ezihleliwe, ubukhulu bokuqapha lincane, alikwazi ukuqapha izimo eziningi ezilindelekile, kulula ukubheka iziphetho ezifile kakhulu, dlala indima yezokuphepha ayiyinhle. Lokhu kudinga ikhamera ye-PTZ enamandla - LS Vision High-Speed ​​High-speedIkhamera yenethiwekhi ye-WiFi Ptz Dome.
LeliIkhamera ye-PTZ I-PAN / TILT ingasondeza ngaphakathi nangaphandle uhla oluphelele lokunyakaza (kwesobunxele / kwesokudla / phezulu / phansi) nokusondeza. Ngaphezu kokubheka ubukhulu bokuvuselelwa, futhi inomsebenzi wokuqapha iselula, engxenyeni yelensi ye-Camera ye-ARRAY array array infrared infray flow emthonjeni kanye ne-Finland Ledil Lens ukuthola indawo ezungezile, noma ngabe izinto zihamba nquma indlela video noma lens Photography Direction. Inhlangano yelens imvamisa idinga iqoqo ledivaysi ethe xaxa yokulawula kwangaphambili ukuhambisa ilensi enezithombe ezithwala umthwalo ukuze idluliselwe endaweni oyifunayo kanye nokugxila, le nkampani inezikhundla zokubuka eziyi-128, Ungasetha isikhathi sokuhlala nesikhundla esethiwe, ngakho-ke ulawula kalula.
Amakhamera we-PTZ ngokuvamile afakwa ngaphandle ekuqapheleni indawo ehlukahlukene yendawo, kufanele ibe nomoya nemvula, uthuli namanzi neminye imisebenzi. Ikhamera inomugqa oyingqayizivele wedizayini engangeni manzi, enomsebenzi onamandla wamanzi; ukusetshenziswa kwe-silicone gasket kanye ne-aluminium alloy shell ukuvikela uthuli ekungeneni; Kwikhamera ngaphakathi kwedivaysi epholile ye-semiconductor elayishwe, ingashintsha ngokuzenzakalelayo izinga lokushisa, uhlelo oluhle kakhulu lokupholisa ukuqinisekisa ukuthi ikhamera ingasebenza ngokuqinile. Ubuchwepheshe buthole amalungelo obunikazi bakazwelonke.
Ungakhokha futhi imali encane ukujabulela izici ezingeziwe ezinamandla. Uma ungenaso isikhala esanele sokugcina, ungangeza i-TF Card Slot, futhi ungakhetha umsebenzi we-POE. Umsebenzi we-Poe usetshenziselwa ukudlulisa idatha kusiginali yekhamera ngasikhathi sinye, kodwa futhi nemishini yokuhlinzeka ngobuchwepheshe be-DC Power Supply. Ubuchwepheshe bePoe bungaqinisekisa ukuphepha okukhona okuhlelekile ngenkathi uqinisekisa ukusebenza okujwayelekile kwamanethiwekhi akhona, kunciphise izindleko.
Ikhamera ye-LS Vision WiFi PTZ ephezulu ye-Ball Network Ikhamera inomsebenzi oqinile kanye nokubukeka okuseqophelweni eliphezulu, ngikholelwa ukuthi kuzoba namathemba amahle nemakethe ebanzi.
PHAMBI Iphuzu eliyisihluthulelo lamakhamera agqoke amakhamera wephoyisa
I-LS Vision IP Camera Solution Study OLANDELAYO